Kooxaha Chelsea, Iyo Manchester United Ayaa Labaduba Xiisaynaya Kingsley Coman
HomeWararka Ciyaaraha MaantaKooxaha Chelsea, iyo Manchester United ayaa labaduba xiisaynaya Kingsley Coman
June 11, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Chelsea iyo Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in labadaba xiiseynaya saxiixa Bayern Munich weeraryahanka Kingsley Coman inta lagu guda jiro xagaagan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
24 jirkaan ayaa qaab ciyaareed xoogan ku soo qaatay Bayern intii lagu guda jiray ololihii 2020-21, isagoo dhaliyay 7 gool isla markaana ka qeyb qaatay 13 caawin 38 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Qandaraaska Coman ee Allianz Arena ayaa dhacaya wax ka yar labo sano, waxaa jiray soo jeedino ku saabsan inuusan ku faraxsaneyn mushaarkiisa.
Warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegeysa in Man United ay si cad u sheegtay inay diyaar u yihiin inay la kulmaan mushaharka weeraryahankan haddii uu u dhaqaaqayo Old Trafford
Sida laga soo xigtay Fussball Transfers , kooxda 20-ka jeer heysata horyaalka Ingariiska ayaa ‘xaqiiqdii muujineysa xiisaha’ Coman, halka Chelsea ay sidoo kale dooneyso inay keento Premier League.
Hase yeeshe, warbixinta ayaa sheeganeysa in Bayern ay dejisay qiimaha xidigan 100m (£ 86m) ah oo ay ku dooneyso xidigan.
Coman, oo haatan ka tirsan xulka France ee Euro 2020, ayaa dhaliyay 41 gool isla markaana diiwaan geliyay 50 caawin 200 kulan oo uu u saftay kooxdiisa Bundesliga tartamada oo dhan.